Vamwe - Zishan Boka
Jiangsu Zishan Biological Co., Ltd. (NEEQ: 836539) yakavambwa muna Chivabvu 9, 2012 naFujian Zishan Group Co., Ltd.yedu yenyika kiyi inotungamira bhizinesi mune zvekurima maindasitiri, imwe yemakambani makuru gumi ezvigadzirwa muChina, uye bhizinesi rakakosha muindasitiri yezvikafu yenyika. Kugadzirwa kwemari. Muitiro wekuti Zishan Boka rakazvipira mukushandisa tekinoroji yazvino kusimudzira kurima kwazvino. Iyo kambani inoronga kuunza yepamberi michina uye tekinoroji yekuvaka iyo Zishan Inodyiwa Mushroom Silicon Valley Industrial Park muChina mumakore 3-5 makore. Kurima nekugadzirisa base.
Iyo purojekiti iri kumadokero kweSanhe Town, Hongze District, Huai'an Guta, rinozivikanwa se "Pearl reHuaishang" uye "Nyika yeHove neRice". Iyo yekufambisa iri nyore kwazvo. Iyo nharaunda ine yakasarudzika mamiriro ekunze mukati megore, nekunaya kukuru kwemvura uye neavhareji tembiricha yegore rose ye14 ° C. Iyo zvakare yakapfuma zvakanyanya mune zviwanikwa zvemvura. Icho chiri pasi pemakiromita matatu kubva kuHongze Lake. Iyo nharaunda ine yepamusoro-soro gorosi nenzvimbo yekudyara mupunga yemazana mazana matanhatu emamiriyoni mu, uye huwandu hwegore rino hwekuchengeta huku Kupfuura mamirioni gumi nemashanu, yemhando yepamusoro gorosi mashanga uye manyowa ehuku zvinopa zvakakwana mbishi zvigadzirwa zvekugadzirwa kwefekitori yeAgaricus bisporus. Iyo kambani inoronga kuisa mari inosvika mazana mashanu emamiriyoni ema yuan mu500 maeka epasi. Mushure mekupedzwa kweprojekiti, goho repagore reAgaricus bisporus matani zviuru makumi matatu nemashanu, izvo zvinogona kuburitsa matani zviuru makumi maviri emugaba weAgaricus bisporus uye howa hwakarungwa Mari yekutengesa ichave mazana mashanu emamiriyoni ema yuan, purofiti uye mutero zvichave makumi mashanu emamiriyoni emadhora, mabasa mazana masere achapihwa, uye varimi mazana maviri nemazana mashanu vachapfuma.
Iyo purojekiti inotsigirwa zvakanyanya uye inochengetedzwa nemakanzuru emunharaunda, matunhu, uye mataundi ebato makomiti nemapazi ehurumende. Chikamu chinotevera uye chikamu chechipiri cheprojekti chakaisa mari yemamiriyoni zana nemakumi mashanu emamiriyoni mu323 maeka epasi, uye vakavaka 15-ton otomatiki tembiricha yekudzora yakanyorova bisporus howa yekudyara musangano. 2 Pane makamuri 107, makumi maviri nematanhatu emagetsi. zvikamu, uye musangano wemushroom wemunyu. Imwe imba yekubikira, imwe simba rekugovana magetsi, imwechete yekugadzira ivhu, imba imwe yekuchengetera, uye imwechete imba yekuchengetera mabhakitiriya. Imwe yekutakura imba uye inotonhora kuchengetedza, imwe kutonhora uye kupisa nzvimbo. Chikamu chechipiri cheprojekiti chakapedzwa munaGunyana 2015 uye zvakaiswa zviri pamutemo mukugadzirwa. Iyo yechitatu-chikamu chirongwa cheayo epaki maindasitiri anoronga kuvandudza nyowani mitsara yekugadzira chikafu matatu inosanganisira bisporus howa uye yayo yakakonzerwa kugadzirwa tambo, uye kuvaka imba nyowani yekudyara howa ye32,000 mativi emamita, ayo anogona kugadzirisa 15,000 matani e bisporus howa uye zvimwe zvekudya. pagore. Mushure mekunge chirongwa ichi chapera zvizere, zvinofungidzirwa kuti goho repagore reAgaricus bisporus matani zviuru makumi matatu nemashanu, makedheni eAgaricus bisporus uye matani zviuru makumi maviri emabhurowa howa anogona kugadzirwa, uye varimi 2 500 vanozopfuma. Parizvino, kuvakwa kweyechitatu-danho imba yekudyara howa ine inoburitswa pagore ye4000 matani ebisporus yatanga, uye zvakadzama kugadzirisa mapurojekiti akadai seanogadzirwa howa uye yakanyatsoiswa muto zvakare ari mukutenderera kuzere.